के प्रक्रिया पुर्याइयो भने दलालबाट ठगिनबाट बच्न सकिन्छ ?
Wed, Feb 19, 2020 | 21:13:41 NST
बलदेव गौतम / पोखरा
प्रश्न : म विदेश जाने तयारी गर्दै छु । विदेश जाँदा के के कुरामा सचेत भइयो भने विदेश गएर दुःख पाउनु पर्दैन ? नेपालमा के के प्रक्रिया पुर्याइयो भने दलालबाट ठगिनबाट बच्न सकिन्छ ?
उत्तर : ज्ञान प्रसाद गैरे, वैदेशिक रोजगार व्यवसायि, सकभर विचौलियाहरुको पछि नलागी भरपर्दो वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट जाने हो भन्नेकुरा प्रश्ट हुनुपर्यो । विदेश जाँदाखेरी कुन कम्पनीमा जाने हो, काम के हो, तलब सुबिधा कस्तो छ थाहा पाएर जानु होला । हरेक रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई डिमान्ड बुक पठाएको हुन्छ । त्यसमा कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी, जस्तै : कम्पनीको उत्पादनहरु, कार्यस्थल, खाने बस्ने ठाँउ लगायत फोटो सहित हुन्छ । त्यो डिमान्ड बुक हेर्न सकिन्छ । र तपाईंको विदेश जान भिसा प्रक्रिया पुरा भएको हो भने चाहिँ विदेशमा हाम्रा कुटनितिक नियोगहरुका सम्पर्क नम्बर बोकेर जानु भयो भने भोलि समस्या पर्दा सम्पर्क गर्न तपाईंलाई सजिलो हुन्छ ।